Malachite chrysocolla guzobere ọmarịcha anụnụ anụnụ na okirikiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ - vidiyo
Zụta eke chrysocolla malachite n’ụlọ ahịa anyị
A na-achịkọta Malachite na chrysocolla ọnụ iji mepụta ọmarịcha okirikiri nke agba tozuru oke na mbara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ma ọ bụ okirikiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị n'etiti chrysocolla na-acha anụnụ anụnụ.
Chrysocolla bụ mmanụ phyllosilicate ọla kọpa hydrated.
Chrysocolla nwere cyan na-acha anụnụ anụnụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ obere ọla kọpa, na-enwe ihe siri ike nke 2.5 ruo 7.0. Ọ bụ nke sitere na nke abụọ yana usoro ndị dị na ọla ọcha. Mineral ndị dị na ya bụ quartz, limonite, azurite, malachite, cuprite, na mineral ndị ọzọ. A na - achoputa ya dika botryoidal ma obu ihe ndi mmadu mechiri emechi. N'ihi agba ya na-acha, a na-agbagha ya na turquoise mgbe ụfọdụ.
N'ihi ịbụ ihe a na-ahụkarị karịa turquoise, ịdị obosara ya, na ihe doro anya, agba mara mma nke na-acha anụnụ anụnụ na nke na-acha anụnụ anụnụ, chrysocolla bụ nke a ma ama maka iji ya mee ihe dị ka nkume gemstone maka ihe ndị e ji achọ ihe na ịchọ mma kemgbe oge ochie.
Malachite bụ mineral carbonate hydroxide mineral. Ogwu a na - acha akwụkwọ ndụ na - acha akwụkwọ ndụ na - etolite na usoro monoclinic kristal, ma na - abụkarị botryoidal, fibrous, ma ọ bụ stalagmitic pụta, na mpekere na omimi, oghere dị n'okpuru ala, ebe okpokoro mmiri na mmiri mmiri na-enye ụzọ maka ọdịda mmiri. Otu kristal iche iche adịghị obere, mana ọ na-adị ka nke dị obere ka ọ bụrụ ụlọ nke acicular. Pseudomorphs ọzọ kristal ma ọ bụ blocky azurite kristal na-emekwa.
Chrysocolla malachite pụtara
Nkume abụọ ahụ na - agwakọta ike ike siri ike nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Malachite na ike dị mma na nke ziri ezi nke Chrysocolla na-acha anụnụ anụnụ. O na akpochapuchapu ihe ojoo na egwu, enwere ike iji ala ma sachaa ahihia anyi. A na-eji ya agwọ ọnya afọ, gụnyere ndị kechiri usoro ịmụ nwa na ndị ihe mgbu kpatara. E kwuru na okwute ahụ dị mma maka ịgwọ ọrịa ndị metụtara nrụgide.
Chrysocolla malachite, sitere na Kongo, Afrịka